Rice efere, dumplings, buns, spring apụta - aha ya, ha niile nọ na menu ma na-anụ ụtọ dị ka ezigbo ọ bụrụ na ị nọ na China. Nke ahụ bụ ihe na-atụ anya n'aka otu n'ime ndị kasị mma Chinese ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Europe. Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị na-esi na Amsterdam ụgbọ okporo ígwè, ị nwere ike enwetaghị a ụgbọ okporo ígwè si Paris, Berlin, na ndị ọzọ na European obodo.
Kwuo Du Dragon bụ n'ezie n'etiti ụlọ oriri na ọ Bestụ Bestụ kacha mma na Europe - Brussels, Belgium
Ọzọ restaurant na-anya isi a mma n'ime ime na ubi imewe n'akụkụ ya ịtụnanya efere, Kwuo Du Dragon na Brussels na-n'ụzọ ziri ezi na-akpọ otu n'ime ndị kasị mma Chinese ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Europe. na n'elu 300 oche na-enwekwa ornamental ubi, ị ga-eche dị ka ị na-eje ije n'ime a kwesịrị ekwesị Oriental nrọ. Ọ bụla efere bụ ebube, ma anyị ga-ewepụpụta mbadamba mbadamba na ọpụrụiche ụlọ, Peking ọbọgwụ, dị ka ihe abụọ ị ga na-agbalị ma ọ bụrụ na ị na-na na eleta Brussels ụgbọ okporo ígwè.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-chinese-restaurants-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)